Ngaba iiplagi zeWordPress zeNdleko zeMali? - Learn Expert Blogging
Ngaba iiplagi zeWordPress zeNdleko zeMali?
I-WordPress liqonga elisetyenziswa kakhulu kwi-Intanethi phantse 41% Abasebenzisi bakha iwebhusayithi yabo kwiWordPress. Isimahla, Vula Umnikezi, kwaye ibhetyebhetye kakhulu. Unokwandisa indlela onqwenela ngayo ngeendlela ezininzi zokwenza ngokwezifiso kwiiplagi.
Iiplagi zeWordPress simahla sinezinto ezincinci. Bakubiza imali ukuze basebenzise amanqaku apheleleyo. Intlawulo inokuba yexesha elinye okanye ephindaphindekayo ngokusekwe kwinkonzo oyifezekisayo.
Iiplagi zilicandelo lePlatform yeWordPress. I-WordPress ngokwayo isoftware yasimahla ekuvumela ukuba yenza iiwebhusayithi kunye neeblogi ozifunayo. Ungahlela ngokulula, yongeza imigca yeekhowudi, ukuphindaphinda, thengisa kwaye usasaze njengoko isisoftware evulelekileyo ngaphandle kwelayisensi yoluntu. Kuthetha ukuba akukho sithintelo sokwenza olo hlobo lwenkonzo. Nangona kunjalo, abathengi bahlawula umphuhlisi wokongeza ikhowudi kunye nokuphucula ukwenziwa ngokwezifiso njengoko kufunwayo.
Iiplagi zeWordPress zibiza imali
Iiplagi zeWordPress zasimahla kunye neFreemium
Ukongeza koku, Iiplagi zeWordPress sisiqwenga semigca yokufaka iikhowudi, ezisebenza njengolwandiso lweempawu. Ndihlala ndicebisa ukuba umthengi ahlawule umrhumo weprimiyamu yeeplagi ukuphucula ukusebenza. Ukuba ayingonjiniyela wekhowudi ye-PHP, Ndihlala ndithatha uncedo lweeplagi.
Nanini na xa ndakha iwebhusayithi yam kumthengi wam, Ndihlala ndicinga ngokwakha iwebhusayithi ebunjiweyo ngokupheleleyo ngoncedo lweefowuni zasimahla. Andizange ndizame ukwandisa inkcitho yabo. Ngamaxesha athile, Ityala lenzeka xa abanye babathengi bam befuna iiwebhsayithi ezinobungcali eziphambili. Lo mnqweno undinyanzela ukuba ndiye kwiimpawu zepremiyamu.
Ngokufanayo, Kwiinyanga ezimbalwa ndibuyile ndathenga “Iplagin yenkqubo“. Le iplagi ngoku ilusuku ifumene ukuthandwa okukhulu. Uncedo lwale plugin kukongeza ngokuzenzekelayo imigca yekhowudi ngasemva. Ngale plugin, yongeza ukutsala kunye nokwehla kwenqaku ukuvumela ukuba ndikhule ngaphakathi kweentsuku ezimbalwa. Oku “Inkqubo yenkqubo” iplagi indibiza 1000 kunye neeDola ngonyaka eziphindaphindayo.
Iiplagi zeFreemium zifana nencasa yomkhenkce. Awunakho ukufumana iskop esifunekayo. Kodwa ungazi ngokulula ukuba isebenza njani iplagi ethile yeWordPress, kuya kuba luncedo njani ukuba uyaqhubeka nenkonzo yabo?
Ukuba ungumntu oqalayo, Mna ngokobuqu andifuni ukuya kwiplagi yepremiyamu kwinqanaba lokuqala. Kuya kufuneka uphuhlise iwebhusayithi eneempawu ezibalulekileyo endaweni yokwakha ukuya kwinqanaba lobungcali. Njengoko ukhula kunye neshishini lakho ukuthenga iplagi yepremiyamu kuya kufana neqhekeza lekhekhe.
Ngaphandle kwalokhu ndincoma ngokobuqu ukuba awukhupheli iiplagi zepremiyamu ngokungathandekiyo. Njengoko benditshilo kuwe ngaphambili, ziphuhliswa phantsi kwelayisensi yoluntu ngokubanzi. Kuthetha ukuba nabani na unokongeza imigca yekhowudi kuyo, repackage kwaye uyilayishe kwi-intanethi ilebheli yasimahla.
Icala elisezantsi lokukhuphela ngokungekho semthethweni kukuba banesiqwenga sekhowudi esinokulandelwa ngokulula kwaye banokuqhekeza iwebhusayithi yakho ngokulula kwinqanaba elizayo. Ukugqobhoza kuthetha ukufumana ikhowudi yabo ebhaliweyo. Bayayazi indlela yokuqhekeza loo khowudi kunye nokufikelela kwiwebhusayithi. Ngokwenene oku iba kukudana kuwe. Sicebisa ukuba ukhuphele iiplagi ezisemthethweni Indawo yokugcina iWindowsPress.
Kukonke, Ezinye iiplagi zeWordPress zibiza imali kuwe, Kukho amawaka eeplagi kwindawo yokugcina yeWordPress. Unokufumana ngokulula enye okanye enye. Ukuba umntu ukubiza, oko akuthethi ukuba enye iplagi yonjiniyela esenza njalo. Ngaphezu koko, Iiplagi zibiza imali kuwe ngenyanga, ngonyaka ixesha elinye, okanye rhoqo, kuxhomekeke kwimfuno yakho ukuba uhamba njani nayo.
Ndingayithenga i-domain ku-Godaddy kunye noMamkeli kwi-WIX?
Previous PostYimalini ongayenza kwiBhlog yeWordPress?
Uyenza njani indawo yeWordPress ngaphandle kokuHamba?
Ndingayakha iwebhusayithi eneWordPress ngaphandle kweDomain?